Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaatid waxa ku saabsan soo bixitaanka Lumbar [Lumbar Disc Prolapse]
Soo noqoshada lafdhabarta lumbar waa dhaawac disc ah kaas oo waxyaabaha jilicsan ee ku jira mid ka mid ah disk-yada intervertebral ee dhabarka hoose ay ku riixeen lakabka sare.
Cufnaantaan jilicsan waxaa loo yaqaan 'nucleus pulposus' - waxayna sababi kartaa neerfa xanuun iyadoo ku xiran hadba inta ay ka soo baxeyso saxanka iyo haddii ay ka careysiiso xidid xidid. Tani waxay ka dhigan tahay in xanuunka la xiriira soo-dhaca dhabarka hoose uu kala duwanaan karo.
Maqaal: Lumbar Soo Dhaca
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 16.03.2022
Waxaa qoray: Vondtklikkene Caafimaadka isku dhafka ah - dept. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Viken) iyo dept. Eidsvoll Sound (Bay).
- Waaxyadayada edbinta ee Vondtklinikkene ee Oslo (Lambertseteriyo Viken (Eidsvoll Sound og Råholt) Dhakhaatiirteenu waxay leeyihiin aqoon sare oo xirfadeed oo gaar ah xagga qiimaynta, daawaynta iyo tababarka baxnaaninta ee soo noqoshada laf dhabarta. Guji linksyada ama iyada si aad wax badan uga akhrido waaxyadayada.
Maqaalkan waxaad ku baran doontaa soo noqoshadaada si ka wanaagsan - yaase og, malaha waxaad saaxiibo yeelan doontaa markale? Ugu yaraan waxaan ku dadaali doonnaa inaan ku caawinno.
Waxaad wax badan ka baran doontaa:
Calaamadaha Soo Dhaca Lumbar
+ Dhibaatooyinka soo-dhaca iyo dheellitirka
+ Soo Dhac iyo Xanuun Dhabar Ah
+ Dib-u-dhac iyo Kabuubyo
+ Xanuunka Soo Dhicista iyo Radiant
+ Soo-dhicitaanku had iyo jeer ma waxyeeleeyaa?
Sababta: Waa maxay sababta aad dhabarka hoose ugu soo dhacayso
+ Hidaha iyo Epigenetics
+ Shaqooyinka iyo walbahaarka maalin kasta
+ Yaa dhabarka ka soo noqda?
+ Dib-u-dhacii dhabarku ma iskii u tagi doonaa?
3. Ogaanshaha Soo Dhaca Dhabarka Hoose
+ Imtixaan shaqo
+ Tijaabada Neerfaha
+ Baadhitaanka Baadhista Sawirka
4. Daawaynta Soo Dhaca Laf-dhabarta Lumbar
5. Qalliinka Qaliinka Soo Dhaca
6. Is-xakamaynta, Layliga iyo Tababarka ka dhanka ah Soo-Dhawista Dambe
+ Talooyin loogu talagalay Is-xakamaynta Ergonomic
+ Layliyada soo-dhaca dhabarka (oo leh muuqaal)
7. Nala soo xidhiidh: Rugahayaga
8. Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo ee ku saabsan Soo-Dhaaca Lumbar (FAQ)
- Marxaladda degdega ah ee soo laabashada laf dhabarta waxay noqon kartaa mid aad u xanuun badan
Caadi ahaan loo yaqaan, xaaladda waxaa badanaa loo yaqaannaa silbashada disc - tani waxay markaa tixraacaysaa cufnaanta jilicsan ee ka soo baxaysa saxanka intervertebral laftiisa. Marxaladda degdegga ah, xaaladdani waxay noqon kartaa mid xanuun leh - ka dibna waxay ku habboonaan kartaa habab isku-dhafan oo ka kooban is-cabbiraad, daaweyn jireed iyo xanuun baabi'iye. Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto at Boggayaga Facebook haddii aad wax su'aalo ah ama ra'yi ah qabtid. Waxaan ku xasuusineynaa in aad ka heli doonto leyli iyo muuqaal maqaalka hoose. Hoos u dhaji si aad u aragto fiidiyooyin dheeri ah oo jimicsi fiican kuu leh oo leh dib u soo kabashada.
Dib-u-dhac ku yimaada dhabarka hoose wuxuu keeni karaa noocyo kala duwan oo xanuun iyo calaamado ah - iyadoo ku xiran xajmiga iyo qanjaruufka soo dhicista. Qaybtan, waxaanu si qoto dheer ugu eegi doonaa calaamadaha iyo xanuunka kala duwan ee laga yaabo inaad la kulanto. Bandhigga caadiga ah badanaa waa dhabar xanuun oo ay weheliso shucaac lugaha hoos ugu dhacaya lugta ama cagta. Taas waxaa dheer, qaar ayaa laga yaabaa inay la kulmaan kabuubyo iyo awood la'aan.
Miisaaniyadda liidata iyo dhaqdhaqaaqa
Xanuunka Dhabarka ah ee Deegaanka
Cudur La'aan Iyo Dareemida Dareenka Qayb Ka Mid Ah Maqaarka (Dermatomas)
Xanuun loo Jeedsaday oo Dhabarka Lugaha ama lugta ah
Shucaac ama Xanuun
Dhibaatooyinka prolapse iyo isu dheelitirka
Herniation disc ee dhabarka hoose wuxuu ka gudbi karaa dheelitirkaaga oo ka sii dari karaa. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah qanjaruufo neerfaha. Dareemayaasha matoorku sidaas darteed uma diri karaan ama heli karaan calaamadaha koronto si hufan sidii hore natiijaduna waa ka jawaabid gaabis iyo xirfado dhaqdhaqaaq oo liita. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in khatarta dhicitaanku ay korodho sababtoo ah xakameyn la'aanta lugaha iyo cagaha. Iyadoo qanjaro neerfaha waaweyn ah muddo ka dib, tani waxay sidoo kale noqon kartaa mid dabadheeraad ah.
Soo Noqoshada iyo Xanuunka Dhabarka
Soo dhicintu waxay u dhici kartaa si tartiib tartiib ah ama dhacdo degdeg ah. Waxa ay dad badani ka fikirin waa in ay jirto sabab ay u dhacaan - badanaana waa in aad dhabarka hoose ku rartey si ka baxsan awoodda. Natiijadu waxay markaa noqotaa murqaha dhabarka oo kacsan, kala-goysyada qallafsan iyo shaqada dhabarka oo liidata - taas oo markaa horseedi karta in saxanku ku soo dhaco dhabarka hoose. Soo-jiidashada lafteedu waxay dabcan sidoo kale keeni kartaa xanuunka dhabarka, laakiin inta badan waa murqaha iyo kala-goysyada ku wareegsan kuwaas oo sidoo kale qayb fiican ka ah xanuunka.
Soo-bax iyo Numbness
Marka la qanjaro neerfaha, waxaan lumin karnaa dareenka dareenka iyo calaamadaha. Tani waxay ka dhigan tahay in qofku uu dareemi karo ama kabuubyo maqaarka meelaha ay saameeyeen ee ka tirsan dareemayaasha saameeya - meelaha gaarka ah ayaa si fiican loogu yaqaannaa dermatomes. Haddii neerfaha lagu dhejiyo L5 dhinaca midig - markaa tani waxay kuu horseedi kartaa inaad lumiso dareenka lugta midig ee midig.
Soo-bax iyo Shucaac lugta, Lugaha ama Cagta
Marka neerfaha dhabarka lagu qabto, tani waxay ku siin kartaa calaamado xanuunka hoos u dhaca lugta taasoo ku saleysan neerfaha la qooyay. Tan waxa loo la kulmi karaa xanuun fudud oo xanuun badan ama sida ka xoog badan, koronto badan, calaamadaha xanuunka. Tusaalaha hoose, waxaan ku tusineynaa sida soo dhicitaanka L5 loo dareemi karo.
Tusaale: Infekshanka xididka ee loo yaqaan 'S1' (waxay ku dhici kartaa soo dhicitaan gudaha L5 / S1)
Dareenka dareenka: Dareen hoos u dhaca ama korodhka ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco maqaarka maqaarka ee la xidhiidha taas oo hoos u sii socota ilaa suulka weyn.
Xirfadaha dhaqdhaqaaqaMuruqyada leh sahayda dareemayaasha ee S1 waxay sidoo kale la kulmi karaan daciifnimo inta lagu jiro baaritaanka muruqa. Liiska murqaha uu saameyn karo waa dheer yahay, laakiin inta badan saameyntu waxay aad u muuqataa marka la tijaabiyo xoogga muruqa ee ah in la leexiyo suulka weyn ee dhabarka (extensor hallucis longus) tusaale; iyadoo la tijaabinayo caabbinta ama tijaabinta wiishashka suulasha iyo lugaha lugaha. Muruqaasi waxa kale oo uu sahay ka helaa dareemaha L5, laakiin waxa uu ka helaa calaamadaha ugu badan ee S1.
Muxuu Prolapse badanaa u saameeyaa L5 iyo vertebrae hoose?
Sababta ay L5 ugu badan tahay u saameeya soo dhicisku waa uun anatomical. L5 waa laf dhabarta shanaad iyo tan hoose - oo sidaas awgeed si gaar ah ayey u soo ifbaxdaa marka aan istaagno oo soconno. Si fudud waa in ay qabato inta badan shaqada marka ay timaado nuugista naxdinta leh. Dhabarka hoose sidoo kale aad ayuu u soo baxaa marka wax la qaadayo ama la qabanayo shaqo culus. Gaar ahaan ka shaqaynta hore u foorarsan iyo maroojintu waxay noqon kartaa mid aan fiicnayn.
Prolapse Markasta Ma Xanuunaa?
Xaqiiqdu waxay tahay in sida ay u xanuun badan tahay soo laabashadu ay ku xiran tahay dhowr arrimood oo kala duwan. Xaaladaha qaarkood, halka mugga soo-dhicista laga yaabo inuu ka yaraado oo aan ku cadaadin neerfaha, waxay noqon kartaa mid asymptomatic ah. Dhab ahaantii, cilmi-baaristu waxay muujisay in in badan oo naga mid ah ay ku socdaan hareeraha iyada oo aan saameyn nagu yeelan dhammaan (1). Tani waxay kuxirantahay in soo-dhicisku ku cadaadiyo dareemayaasha dhabarka iyo inkale. Si kastaba ha ahaatee, marka ay qanjiso neerfaha dhabarka, waxay keeni kartaa xanuun gudaha dhabarka, iyo sidoo kale kabuubyo, xiirid iyo xanuunka shucaaca ee lugta, lugta hoose ama cagaha. Waxa kale oo ay keeni kartaa calaamado kale sida dheelitirnaanta liidata, la'aanta xirfadaha dhaqdhaqaaqa wanaagsan iyo luminta murqaha (la'aanta neerfaha waqti ka dib).
Sababta: Waa maxay sababta aad u leedahay soo-dhac ku yimaadda laf-dhabarka Lumbar? Sababaha suurtagalka ah?
Waxaa jira dhowr arrimood oo go'aamin kara haddii uu ku saameeyo prolapse, labadaba epigenetic iyo hidde-wadaha. Sababaha kale waxaa ka mid noqon kara cilad raridda, dhaca ama hababka kale ee waxyeellada leh.
Sababaha keena hidda-wadayaasha iyo dhaxalka: Hooyada iyo aabaha waxaa laga yaabaa inay si toos ah kuugu lug leeyihiin soo-jiidashada laf dhabarta. Tani waa sababta oo ah qallooca dhabarka hoose waa wax aad dhaxli karto. Laf-dhabarta aadka u toosan, tusaale ahaan, waxay u horseedi kartaa ku dhawaad ​​dhammaan culeyska ku dhammaanaya xagga hoose ee lafdhabarta lumbar oo aan loo qaybin kala-goysyada kale. Kala-guurka lumbosacral (LSO) waa magaca qaab-dhismeedka halka laf-dhabarta laf-dhabarta ay la kulmaan miskaha iyo sacrum - oo loo yaqaan L5-S1. Maaha wax nasiib ah in ay tahay aaggan inta badan aan la kulanno soo-dhacid lumbar. Waxa kale oo aad nasiib u yeelan kartaa in aad dhaxashay derbi khafiif ah oo dibadda ah oo ku wareegsan saxanka intervertebral dhabta ah ee dhabarka hoose. Derbiga daciifka ahi wuxuu si dabiici ah u yeelan doonaa khatar sare oo ah inuu ku dhaco dhaawac saxan ah oo uu saameeyo soo-dhac.
epigenetics: Epigenetics waa arrimo hareeraheena ah oo saameeya nolosheena iyo caafimaadkeena. Tusaale ahaan waa faqri - taasoo macnaheedu noqon karo inaadan awoodin inaad aragto dhakhtar si uu u caawiyo marka xanuunku dhaco. Taa beddelkeeda, waxaad qaniinaysaa xanuunka naftaada oo iska ilaali inaad ogaato inaad ku soo dhacday dhabarka hoose. Qodobbada kale waxaa ka mid ah cuntada, sida aad u firfircoon tahay iyo haddii aad sigaar cabto. Dad badan ayaan ka warqabin in sigaar-cabbiddu ay keento wareegga dhiigga oo liita oo sidaas awgeed ay hoos u dhigto dhaawaca bogsashada.
Shaqo / Load: Shaqooyinka ay kujiraan qaadista culus ee jagooyinka aan fiicnayn waxay ku siin karaan halista sare ee dhaawaca maqaayadaha dhabarka hoose. Laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa shaqo xafiis oo aad u adag oo aad maalintii oo dhan fadhido - oo markaa cadaadis saarto dhabarka hoose maalintii oo dhan.
Ayaa ku dhaca Prolapse xagga hoose ee dhabarka?
Sababtoo ah xaqiiqda ah in saxanadu ay jilicsan yihiin da'da yar, gaar ahaan kooxda da'da 20 ilaa 40 sano ayaa la saameeyaa. Marka aynu sii weynaano, cufka jilicsan ayaa sii adkaan doona oo yaraanaya dhaqdhaqaaqa - taas oo markaa hoos u dhigaysa khatarta ah inaad qaadato saxanka herniated. Laakiin nasiib darro khatartu ma dhammaan. Markaad sii weynaato, waxaad heli kartaa daal iyo jeexan iyo osteoarthritis - taas oo u horseedi karta xaaladaha dareemayaasha ee dhabarkalaf-dhabarka)
Prolapse ma ka takhalusi doonaa laftiisa? Mise caawimaad ayaan raadsadaa?
Dib-u-dhaca dhabarku waa dhaawac saxan ah. Marka la soo koobo, cufka jilicsan ee gudaha ayaa ka soo baxay oo dhex maray derbiga dibadda. Heerarka soo-jiidashada sare, tiradan gudaha ah waxay u horseedi kartaa cadaadis iyo qanjaruufo xididdada dareemayaasha ee u dhow. Saxanka dhaawacan waa la bogsiin karaa - haddii shuruuduhu ku habboon yihiin tan. Waxyaabaha kale, mid ayaa ku xiran hoos u dhigista cadaadiska neerfaha saameeya iyo kicinta bogsashada aagga. Cabbiraadaha ergonomic ee firfircoon, hoos u dhigista cadaadiska ka dhanka ah saxanka intervertebral ee dhaawacan iyo jimicsiga baxnaanintu waxay dhammaantood awood u yeelan doonaan inay gacan ka geystaan ​​horumar degdeg ah oo fudud.
Waxaad u malayn kartaa inuu yahay qaacido xisaabeed. Haddii xisaabintaadu ku sii korodho, soo-dhicitaanku si tartiib tartiib ah ayuu u soo noqonayaa oo u fiicnaan doonaa mar kale, laakiin haddii ay ka baxdo ama eber ka noqoto markaas way ka sii dari doontaa ama way ahaan doontaa mid aan isbeddelin. Sababtoo ah suurtagalnimada jirrooyinka iyo xanuunka muddada-dheer, waxaan guud ahaan ku talinaynaa in qof kasta oo la ildaran dib-u-dhac dhabarku uu raadsado caawimo xirfad leh. Caadi ahaan qaabka loo yaqaan 'chiropractor' ama physiotherapist casriga ah.
3. Ogaanshaha: ogaanshaha soo dhicista dhabarka hoose
Ogaanshaha cudurka prolapse wuxuu ugu horreyn ku saleysan yahay qaadashada taariikhda iyo baaritaan caafimaad. Halkan, takhtarka caafimaad ayaa aruurin doona macluumaadka ku saabsan astaamahaaga ka dibna wuxuu baari doonaa waxqabadka iyo sidoo kale baaritaannada neerfayaasha. Waxaan ku faraxsanahay inaan u qaybinno baaritaanka soo-dhaca dhabarka saddex qaybood oo waaweyn:
Baaritaanka ogaanshaha Sawirka (Haddii La Tilmaamo)
Takhtarka shatiga dadweynaha, sida caadiga ah lafopractor ama physiotherapist casriga ah, ayaa marka hore ku bilaabi doona baarista shaqada murqaha iyo kala-goysyada dhabarka. Halkan, takhtarku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu daaha ka qaado macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan heerka saxanka ee la saameeyay, halkaasoo neerfaha laga yaabo in lagu dhajiyay iyo dhaqdhaqaaqyada u muuqda inay kicinayaan xanuunka.
Baaritaanka Neerfaha ee Soo Dhaca Lumbar
Horaantii maqaalka, waxaan uga hadalnay nooca calaamadaha neerfaha ee qofku la kulmi karo soo-jiidashada dareenka xididka dareenka ee dhabarka hoose. Kuwaas waxaa ka mid ah kabuubyo, hoos u dhac xoog leh iyo xanuunka shucaaca ee lugta. Waxyaalaha kale, takhtarku wuxuu awood u leeyahay inuu baaro neerfaha shaqadaada isagoo tijaabinaya xooggaaga lugahaaga, falcelinta iyo dareenka maqaarkaaga. Meesha uu bukaanku ka dareemo xanuunka calaamaduhuna way kala duwanaan karaan iyadoo ku xidhan hadba neerfaha ama neerfaha ay saameeyeen.
Baaritaanka sawirka ee soo laabashada vertebral
Waxaa jira seddex qaab oo ogaansho oo kaladuwan oo ku habboon inay na siiso macluumaad ku saabsan prolapse hoose. Kuwani waa:
Ma aha wax sir ah oo si fiican loo xafiday in sawirka MRI uu yahay doorashada ugu fiican ee lagu arki karo saxanka herniated si cad oo cad. - laakiin iskaanka CT-gu waa ikhtiyaarka kuwa haysta aaladaha ay saameeyeen shucaaca korantada ama birta ee jirka. Raajadu waxay ku siin kartaa macluumaad iyadoo meesha ka saaraysa burburka jabka iyo muujinta inta lebbiska wadajirka ah ee meesha ka jira.
Raajo ee Prolapse ee dhabarka hoose
Raadiyahaasi wuxuu muujinayaa xirasho / osteoarthritis la xiriirta sabab u ah cadaadiska dareemayaasha ee dhabarka hoose. Raajooyinka sawirka uma muuqan karaan unug jilicsan oo sifiican u muujinaya xaaladda discs intervertebral disc.
Sawirka MR ee Prolapse ee dhabarka hoose
Sawirka kore, waxaan ku aragnaa baaritaanka MRI ee soo-jiidashada dhabarka hoose. Sawirku wuxuu muujinayaa dib u dhac ku yimaadda L3-L4 halkaasoo cufka jilicsan uu si cad gadaal ugu riixayo xagga kanaalka laf-dhabarka.
Sawirka CT ee Prolapse ee dhabarka hoose
Halkan waxaan ku aragnaa sawirka CT oo leh isbarbardhig muujinaya laf-dhabarka lumbar - tusaale ahaan xaaladaha neerfaha ee dhabarka oo cidhiidhi ah oo ay sabab u tahay caleenta ama soo dhicis weyn.
4. Daawaynta Soo Dhaca Qaybta Hoose ee Dhabarka
Daaweynta muxaafadka ee prolapse hoose ee lugta waxay kujirtaa yareynta dareemaha iskujirta iyo fududeynta bogsashada ugu dhaqsaha badan ee suurogalka ah. Tan waxa lagu sameeyaa iyada oo la wanaajiyo shaqada biomechanical ee muruqyada iyo kala-goysyada ay saamaysay, iyo sidoo kale jarista caadooyinka xunxun ee ka hortagaya soo-jiidashada inay soo noqoto. Daawaynta ayaa markaa yeelan doonta shan mabaadi'da ugu waaweyn:
Ka yaree neerfaha ay saameeyeen
Hagaajinta Murqaha iyo Wadajirka Wadajirka
Iska yaree Xanuunka dareemaha
Awoodda Muruqyada udhowda iyo Timaha jilicsan
Kicin bogsiinta iyo hagaajinta
Hababka daaweynta ee Prolapse ee dhabarka hoose
Furaha bogsashada degdega ah ee herniation disc waxay ku jirtaa dhimista isku-buuqa iyo hagaajinta xaaladaha bogsashada. Sababtan awgeed, abaabulka si gaar ah loo habeeyey, daaweynta jiidashada, farsamooyinka murqaha iyo daaweynta laysarka waxay noqon kartaa habab daaweyn oo wanaagsan. Daawaynta waa in had iyo jeer uu sameeyaa takhtar leh oggolaansho dadweyne - lafopractor, physiotherapist ama daaweeyaha gacanta.
Shan ka mid ah hababka daawaynta ee aan door bidnay soo-dhacyada dhabarka:
Jimicsiga jir-dhiska iyo soo-goynta dhabarka hoose
Takhtarka jimicsiga jirka ayaa kaa caawin kara inaad ku bilowdo tababbarka gaarka ah, iyo sidoo kale wuxuu ku siin karaa nasinta calaamadaha farsamooyinka muruqyada iyo duugista. Takhtarka jimicsiga jirka ayaa sameyn doona qiimeyn ka dibna dejin doona barnaamij jimicsi si uu u kiciyo bogsashada agagaarka saxanka dhaawacan.
Cilmiga casriga ah ee loo yaqaan 'Chiropractic and Prolapse'
Lafopractor ma iga caawin karaa soo laabashada dhabarka hoose? Haa - oo leh qoorta prolapse sidoo kale. Lafopractor casri ah ayaa si buuxda u shaqeeya. Tani waxay ka dhigan tahay inay baadhaan oo ay daaweeyaan xanuunka iyo dhaawaca muruqyada, kala-goysyada, seedaha iyo neerfaha. Waxbarashadooda 6-sano ah waxa kale oo ka mid ah 4 sano oo neerfaha ah taas oo ka dhigaysa dhakhaatiirta ugu aqoonta badan si ay kaaga caawiyaan daawaynta ugu fiican ee soo dhiciskaaga. Dhakhtarka loo yaqaan 'chiropractor' wuxuu adeegsadaa shaqada murqaha, abaabulka wadajirka ah ee la habeeyey, jiidashada iyo farsamooyinka dhaqdhaqaaqa dareenka wax ku oolka ah si loo siiyo meel wanaagsan oo neerfaha ah (2). Waxay sidoo kale xaq u leeyihiin inay tixraacaan baaritaanada muuqaalka ah haddii baahidu timaado - waxayna kugula socodsiin doonaan layliyo guriga ah si loo xoojiyo meelaha ay dhibaatadu saameysey.
Dhakhtarka iyo Prolapse
GP'gaaga ayaa awood u yeelan doona inuu kaala taliyo isticmaalka xanuunka baabi'iyaha - Kaas oo kaa caawin kara inaad ka saarto xanuunka ugu xun. Dhakhtarkaaga ayaa sidoo kale awood u yeelan doona inuu kaa caawiyo inaad hesho takhtarka fiisiyoterabi ama lafopractor u dhow kaasoo khibrad weyn u leh ogaanshaha iyo daawaynta soo laabashada.
5. Qalliinka iyo Qalitaanka Lumbar-soo-dhaca
Neurosurgeons iyo dhakhaatiirta qalliinka ilkaha ee qaybta dadweynaha waxay u shaqeeyaan si waafaqsan tilmaamaha qaran iyo tilmaamaha caafimaad - taasoo macnaheedu yahay inay aad ugu adag yihiin in lagugu qalo iyo in kale. Sababta ay dalabaadkaas sare u qabaan ayaa ah in qalliinnada qalliinka laftoodu ay ku jiraan khatar sare - gaar ahaan muddada dheer. Waxaa jira shuruudo gaar ah oo ay tahay in loo tixgeliyo lafaha:
Feejignaanta cillad maskaxeed ee labada lugood (Calanka Cas - Waa in ay Qiimeysaa Waaxda Degdegga ah)
Calaamadaha iyo Xanuunka oo aan soo hagaagi doonin 6 bilood
Khasaaraha kaadiheysta iyo futada futada (Calaamadaha Cauda Equina Syndrome - la xiriir dhaqtar ama qolka gargaarka deg-deg ah isla markiiba haddii aad tan la kulanto)
Cilmi baaris ayaa muujisay in qaliino badan ay muujin karaan saameyn wanaagsan oo waqti gaaban ah, laakiin waxay dhab ahaantii u horseedi kartaa kororka calaamadaha iyo xanuunka muddada dheer. Dhaawaca iyo nabarrada meesha la qalay ayaa ah sababta ugu badan ee tan keenta - lamana qali karo meel fog ka dib marka ay dhacdo. Qaliinka Lumbar wuxuu kaloo ku lug leeyahay khatar gaar ah oo la xiriirta qalliinka laftiisa - iyo in takhtarka qalliinka uu dhaawici karo neerfaha taasoo keenta calaamado ka sii dara. Inkasta oo tani ay tahay mid aad dhif u ah, haddana waxaa habboon in wax laga ogaado.
6. Tallaabooyinka is-xakamaynta, Layliga iyo Tababarka ka dhanka ah Soo-dhaca Laf-dhabarta Lumbar
Qaar badan oo ka mid ah bukaannadayada ayaa na waydiiya wax ku saabsan is-cabbida ay qaadan karaan naftooda si ay u helaan horumar xagga shaqada ah iyo nasinta calaamadaha. Halkan inta badan waa inaan ku siinnaa talo ku saleysan wejiga iyo ilaa heerka uu bukaanku saameeyay. Laakiin is-xakamaynta kaa caawinaysa yaraynta cadaadiska iyo cadaadiska ka dhanka ah saxannada hoose ayaa lagu talinayaa. Saddex is-cabbir oo fudud, kuwaas oo si fudud loo isticmaali karo, ayaa la isticmaali karaa coccyx marka la fadhiyo, barkin miskaha marka la seexanayo iyo isticmaalka tkubbadda riggerpunkt si loo debciyo murqaha kacsan ee kursiga iyo dhabarka (xidhiidhyadu waxay ka furan yihiin daaqad cusub oo akhristaha).
Talooyin 1: Qalliinka 'Ergonomic Coccyx'
Bini'aadamka casriga ah, waxaan ku qaadannaa saacado badan oo maalintii ah meel fadhi. Fadhiista waxay keentaa cadaadis iyo cadaadis badan oo saxannada dhabarka ah. Barkinta dabada ergonomic ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu qaybiyo culeyska dibadda oo sidaas darteed waxay bixiyaan xaalado fadhiisin oo ka wanaagsan dhabarka. Adiga oo dhabarka hoose ka soo baxay, tani waxay noqon kartaa is-qiyaas aad u wanaagsan. Guji sawirka ama iyada si aad wax badan uga akhrido barkinta lafta dabada.
Talooyin 2: Barkinta miskaha
Dad badan oo qaba dhabar-jabka ayaa la ildaran hurdo xumo iyo dhibaato inay helaan meel hurdo oo wanaagsan. Waxaa laga yaabaa inaad ka warqabto in dad badan oo qaba xanuunka miskaha ay isticmaalaan barkin miskaha si ay u helaan meel seexasho oo habboon oo dhabarka iyo miskaha ah? Hagaag, waxay soo baxday in tani ay sidoo kale ugu yaraan faa'iido kuu leedahay adiga oo leh soo noqnoqoshada dhabarka, maadaama ay cadaadis yar saarayso dhabarka hoose. Guji sawirka ama iyada si aad wax badan uga akhrido suufka miskaha.
Talooyin 3: Kubbada dhibicda kicinta
Qalab wanaagsan oo is-daaweyn oo loogu talagalay ka shaqaynta murqaha muruqyada dhabarka iyo fadhiga keligiis. Adiga oo kubbada u isticmaalaya muruqyada kacsan iyo meelaha xanuunka xasaasiga ah, waxaad gacan ka geysan kartaa kor u kaca wareegga iyo xanuunka dhimista.
Layliyo iyo Tababar loogu talagalay Soo Noqoshada
Waa muhiim in tababarku uu ku habboonaado adiga, xanuunkaaga iyo awooddaada. Taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad hesho caawimo si aad u dejiso barnaamijka jimicsiga saxda ah adiga oo loo marayo dhakhtarka jimicsiga jirka ama lafopractor casriga ah. Horaan muuqaalka, waxaanu ku tusinnay laba fiidiyoow oo leh jimicsiyo guud oo laga yaabo inay kugu habboon yihiin soo-dhaca dhabarka hoose - markaa mar kale kor u qaad oo fiiri haddii aanad hore u samayn. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku saabsan jimicsiga laf-dhabarka lumbar ayaa ah inay kaa caawiyaan inaad nafiso neerfaha qanjaruufo, waxay gacan ka geystaan ​​​​kordhinta wareegga dhiigga iyo hagaajinta aagga, iyo inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqa neerfaha (sida in neerfuhu uu noqdo mid dhaqdhaqaaq badan oo xanaaqa) .
VIDEO: 5 Layli oo ka dhan ah Sciatica iyo Sciatica
Sidaad sida caadiga ah u taqaanid (nasiibdarro), laf-dhabarta ayaa inta badan keenta xanaaq iyo qanjidhada dareemaha sciatic. Dareemahani wuxuu markaa sababi karaa xannuun iftiimaya iyo kabuubyo xagga lugaha, lugaha iyo cagaha. Fiidiyowga hoose waxaad ku arki doontaa shan jimicsi oo kaa caawin kara inaad naaqusto cadaadiska dareemeyaasha sciatica, yareeyaan xanuunka dareemeyaasha iyo inaad si fiican u dhaqaaqdo dhaqdhaqaaqa.
MUUQAAL: 5 Jimicsi Oo Xoog Looga Hortagayo Soo Noqoshada
Burburka laf-dhabarta waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay culeyska tartiib-tartiib tartiib-tartiib ah muddo dheer ama daran, culeys xad-dhaaf ah. Iyadoo aan loo eegin sababta, waxaa aad muhiim u ah inaad dib u hesho xakameynta xanuunka dhabarkaaga iyadoo loo marayo jimicsi loo habeeyay. Fiidiyowga hoose waxaad ku arki doontaa barnaamij tababar oo ka kooban shan jimicsi oo ad u gaar ah oo kugu habboon adiga oo soo kicinaya.
Xor ayaad u tahay inaad wadaagto aqoonta ku saabsan prolapse
Aqoonta guud ee bulshada iyo xirfadleyda caafimaadka ayaa ah wadada kaliya ee lagu kordhin karo diiradda saarista sameynta qiimeynta cusub iyo qaababka daaweynta dhibaatooyinka soo noqoshada - dhibaato dad badan dhiba. Waxaan rajeyneynaa inaad waqti siiso si aad arintan ugala wadaagto warbaahinta bulshada isla markaana dhaho waad ku mahadsantahay hormarkaaga.
7. Su'aalo? Mise waxaad doonaysaa inaad ballan ka qabsato mid ka mid ah rugahayada xidhiidhka la leh?
Waxaan bixinaa qiimeyn casri ah, daaweyn iyo tababar baxnaanin oo loogu talagalay dhibaatooyinka soo dhicista.
Xor baad u tahay inaad nagula soo xiriirto mid ka mid ah Rugahayada gaarka ah ( dulmarka rugta caafimaadka waxa ay ka furmaysaa daaqad cusub) ama shid boggayaga Facebook (Vondtklikkene - Caafimaadka iyo Jimicsiga) haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Ballamaha, waxaan ku haynaa ballan XNUMX-saac online ah rugaha caafimaadka kala duwan si aad u heshid wakhtiga la-tashiga ee adiga kugu habboon. Waxaad sidoo kale na soo wici kartaa saacadaha ay furan tahay rugta caafimaadka. Waxaan Oslo ku leenahay waaxyo isku dhafan (oo ay ku jiraan Lambertseteriyo Viken (Råholt og Eidsvoll). Dhakhaatiirtayada xirfada leh waxay kaa sugayaan inay ku maqlaan.
"- La xidhiidh haddii aad rabto in lagaa caawiyo dib u soo celinta nolol maalmeedka firfircoon."
Riix halkan si aad u aragto dulmar ku saabsan rugahayada xiriirka la leh oo leh khibrad takhasus u leh soo-dhac laf dhabarta:
Waqtiga Buugga (Fiiri waqtiyada la heli karo)
(guji isku xirka kore si aad u aragto waaxyaha kala duwan - ama xiriirinta tooska ah ee hoose)
Telefoon: 62 80 90 30
Boostada: [emailka waa la ilaaliyay]
Web: Lambertseter Chiropractor Center iyo Jimicsiga Jirka (Lambertseter, Oslo) Xarunta Eidsvoll Chiropractic iyo Physiotherapy (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Chiropractor Center iyo jimicsiga jimicsiga (Råholt, Viken)
Anigoo rajaynaya caafimaad dhabarka wanaagsan oo dheeraad ah,
Kooxda isku dhafka ah ee Vondtklinikkene
PAGE xiga: - Waa inaad tan ka ogaataa Osteoarthritis-ka dhabarka
Guji masawirka ama isku xirka sare si aad wax badan uga sii ogaato laf-dhabarka laf-dhabarka, baabi'inta iyo maqalidda dhabarka.
8. Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo ee ku Saabsan Soo Dhaca Laf-dhabarta Lumbar iyo Dhaawacyada Saxanka
Ma u baahan tahay fasax jirro haddii ay dhacdo soo-dhawaanshaha hoose ee hoose?
Haddii aad u baahan tahay warqad jirro iyo haddii kale waxay ku xidhan tahay gebi ahaanba soo dhicis iyo shaqada aad qabato. Sababtoo ah xaqiiqda ah in lagugula taliyay inaad sii socoto, caadi ahaan laguma talinayo inaad qaadato fasax jireed oo buuxa - marka laga reebo haddii xanuunka uu yahay mid dabeecadda ah oo aanad shaqayn karin. Xalka dad badan ayaa ah fasax jirro oo la qiimeeyay oo ku jira marxaladda ba'an ee soo-dhacista disc. Tani waxay sidoo kale siinaysaa waqti ku filan oo ay ku nastaan ​​oo ay jimicsi sameeyaan - waxaa u dheer inay awoodaan inay sii wadaan shaqada.
Soocelinta laryngeal ma halisbaa?
Ilaa xad, soo-dhac ku yimaada qaybta hoose ee dhabarkaaga waxay noqon kartaa khatar, laakiin waxay dhammaan ku xiran tahay dhibaatadaada soo-dhac. Soo-jiidashadu waxay noqon kartaa khatar haddii ay tahay dabeecad halis ah oo ay majuujiso xudunta laf dhabarta waxayna u horseedaa Cauda Equina Syndrome - taas oo macnaheedu yahay inaad lumiso dareenka maqaarka ee dhabarka dambe ee barida (fuushad paresthesia), xakamaynta xuubka futada (xaradu waxay toos u galaysaa surwaalkaaga) iyo inaadan awoodin inaad bilowdo qulqulka kaadida. Tani waa kiis naadir ah laakiin aad u daran, kaas oo u baahan doona qalliin depression ah iyo ka saarida cadaadiska neerfaha saameeya. Calaamadaha Cauda Equina Syndrome waxaa loo kala saaraa calan cas waxayna kaa doonayaan inaad isla markiiba wacdo dhakhtarkaaga ama qolka xaaladaha degdegga ah. Soo dhicisku waxa kale oo uu noqon karaa khatar dareenka ah in ay u horseedi karto dhaawaca dareemaha cimriga oo dhan ee qaybaha dareenka iyo dhaqdhaqaaqa haddii aan si dhab ah loo qaadin (3).
Uur leh Prolapse ee dhabarka hoose
Haddii aad uur leedahay oo aad uur leedahay, waxaad weli heli kartaa caawimo iyo daawaynta soo-dhaca dhabarka hoose. Mid ka mid ah farqiga kaliya ayaa ah, dabcan, inaadan ku heli karin kaar-jabiyeyaasha isla khadka kuwa aan uurka lahayn. Markaad uur leedahay, booska miskaha ee isbeddelay (caarada hore) waxay sidoo kale horseedi doontaa cadaadis sare oo ka dhan ah saxannada hoose ee dhabarkaaga. Qaar baa sidoo kale la kulma in ay ku dhacaan sooc ka dib dhalmada - taas oo si toos ah ula xiriiri karta cadaadiska caloosha ee aadka u sarreeya ee aad ku jirto xilliga dhalmada.
Soo-dhaca dhabarka hoose ma noqon karaa mid la iska dhaxlo?
Qofku wuxuu dhaxli karaa arrimo gaar ah oo anatomical ah oo qofka ka dhigaya inuu yeesho khatar sare oo ah inuu ku dhaco soo laabashada dhabarka hoose - si aan toos ahayn qofku wuxuu u odhan karaa soo-dhaca dhabarka hoose wuxuu noqon karaa mid la iska dhaxlo. Waxaad ka dhaxli kartaa dhabar toos ah aabbahaa - ama qaab jeexan oo daciif ah hooyadaa.
Waa maxay macnaheedu inay leedahay soo-dhawaanshaha hoose ee heerarka L4-L5 ama L5-S1?
Soo-dhaca Lumbarku wuxuu ku dhici karaa heerar kala duwan. Laf-dhabarta lumbar waxay u qaybsantaa shan laf dhabarta - laga bilaabo L1 (vertebra sare) iyo hoos ilaa L5 (vertebra hoose). S1 waa ereyga loo isticmaalo vertebra sacrum ee ugu horreeya. Soo-dhac ku yimaada L4-L5 waxay la macno tahay in dhaawaca saxanku uu ku ekaado inta u dhaxaysa afraad iyo shanaad laf dhabarta lumbar. Haddii heerku yahay L5-S1 markaas tani waxay la macno tahay in uu jiro saxan soo dhicis ah oo u dhexeeya laf dhabarta hoose iyo xuubka.
Waa maxay laf-dhabarka laf-dhabarka Ingiriisiga?
Soo noqoshada dhabarka hoose waxaa loo yaqaan 'lumbar disc herniation' oo af Ingiriis ah haddii laga soo tarjumay af Noorweji. Xanuunka shucaaca ah ee aad la kulanto waxaa loo yaqaan 'radiculopathy' - iyo dareemaha nafsadda waxaa loo yaqaan 'dareemaha nafsadda'. Iyo sciatica waxaa loo yaqaan 'sciatica' Ingiriisiga.
Sideed ku ogaan kartaa inaad qabtid soo-kicinta bilowga uur jiifka?
Horudhaca soo-jiidashada waxaa loo yaqaan dabacsanaan disc. Tani waxay ka dhigan tahay in cufka jilicsan ee ku jira mid ka mid ah saxannada intervertebral discs ay ku cadaadinayaan derbiga dibadda, laakiin iyada oo aan derbiga ku wareegsan weli dillaacin. Haddii qalloocyada saxanka lagu arkay baaritaannada sawirka, waxaa laga yaabaa in lagugula taliyo in aad uga warqabto caafimaadka dhabarka iyo jimicsiga.
Ilmuhu ma ku dhici karaa soo kabashada xagga hoose ee dhabarka?
Haa, carruurta sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan kara soo noqoshada laf-dhabarka, laakiin waa dhif iyo naadir. Kuwani sidoo kale sida caadiga ah waxaa loola dhaqmaa kaliya muxaafid ahaan - haddii aysan ahayn kiis aan caadi ahayn.
Ey sidoo kale yeelan karaan laf-dhabarka laf-dhabarka?
Sidayada oo kale, eeyadu waxay ka samaysan yihiin murqaha, kala-goysyada iyo farabadan qaybo kale oo biomechanical ah. Eyga sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan kara soo dhicida dhabarka hoose - calaamadaha weyna kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran cabirka prolapse-ka.
Ma ku yeelan kartaa labalaabo soo dhacda dhabarka hoose?
Qaar aad bay u nasiib badan yihiin oo waxay helayaan waxa aan ugu yeerno laba-laabashada dhabarka hoose. Laba-soo-dhac waxay ka dhigan tahay inaad leedahay laba soo-dhicis oo kala duwan oo heerar kala duwan ah oo dhabarka ah. Midda ugu badan ayaa ah in kuwani ay ka dhacaan is xiga. Tusaale ahaan, soo-dhicista labanlaaban ee ugu caansan waa inaad leedahay soo-dhac L4-5 ah iyo soo-dhac kale oo L5-S1 ah. Tani waxay bogsiintu iyo daawaynta ka dhigi kartaa mid aad u ballaadhan marka loo eego haddii ay ahaan lahayd soo dhac. Laba laabasho. Farxad labanlaab ah.
Soo-kicintu ma xanuun ku keeni kartaa jilbaha iyo maqaarka?
Haa, soo laabashada dhabarka hoose waxay tixraaci kartaa xanuunka ilaa jilbaha iyo weylaha. Tani waxay caadi ahaan ku dhici doontaa hal dhinac oo keliya, maadaama soo-dhicitaanku inta badan yahay midig ama bidix. Haddii aad la kulanto xanuun labada dhinac ah, waxaa yaraanaya fursadda ah inuu ku dhaco dhabarka hoose. Inkasta oo tani ay sidoo kale ku dhici karto soo-dhac dhexe oo ku cadaadiya labada xididada dareemayaasha. Caadi ahaan, xanuunkan oo kale waxaa weheliya calaamado kale oo neerfaha/xanuunnada, sida kabuubyo, jidhidhicir, jidhidhicir iyo muruq daciifnimo.
(Faallo na raac haddii aad rabto inaan samayno muuqaal leh jimicsi dhibaatadaada)
Ropper, AH; Zafonte, RD (26 Maarso 2015). "Sciatica." Wargeyska New England Journal of Medicine.372 (13): 1240-8. laba:10.1056 / NEJMra1410151.PMID 25806916.
Leininger, Brent; Bronfort, Gert; Evans, Roni; Reiter, Todd (2011). "Manipulation Spinal or Mobilization for Radikulopathy: Dib -u -eegis Habaysan". Daaweynta Caafimaadka Jirka iyo Baxnaaninta ee Waqooyiga Ameerika. 22 (1): 105-125. laba:10.1016 / j.pmr.2010.11.002. PMID 21292148.
Elin Askildsen wuxuu leeyahay,
Sharaxaad weyn, waxaan jeclaan lahaa in aan wax badan ka ogaado daaweynta laser-ka-bararka. Waad ku mahadsan tahay Elin Askildsen
Vera weyn wuxuu leeyahay,
Aad u xog badan oo xiiso leh. Waxa kale oo aan la yaabanahay waa isku-dhafka maskaxda iyo soo-jiidashada. Taasi waa, stress, shaqada guriga iyo waayo-aragnimada xun. Sidee u dhacdaa soo dhicistu? Tusaale ahaan, nolosha dhinaca qorraxdu ma hagaajin kartaa boholaha? Taa beddelkeeda, cagajuglaynta, walbahaarka maaliyadeed iyo cadaadisku ma sii xumeyn karaan soo-dhacyada? Waxaa igu dhacay soo dhac waqti dheer ka hor.
Way hagaagtay oo waan ka takhalusay. Laakiin 2013 - 2014, waxaan helay daryeel dheeraad ah iyo kor u kaca shaqada guriga ee qoys aan saaxiibo nahay oo ii baahan. Tani waxay sii xumeysay soo-dhacii si aanan hadda u tababarin oo aan u jimicsan karin sida aan rabo. Dhabar xanuunku wuxuu iga joojiyaa inaan socdo wakhti dheer oo aan istaago wakhti dheer. Waa inaan nastaa oo aan hurdo badan seexdaa. Mararka qaarkood waan jiifsan karaa maalinta oo dhan hurdo fiican habeen ka dib. Maan haysan tan si xoog leh ama maba haysan dhammaan sannadkii hore intaan ku noolaa oo wax ku baranayay Spain. Ka dib markii aan imid tuuladayda Fagernes ee Valdres, waxaan la kulmay cawaaqib xumo iyo dhaawac ka dib dhibaatooyinkii iyo dib-u-dejintii nolosha.